UNHCR oo soo bandhigtay Tirada Muhaajiriinta lagu badbaadiyay Xeebaha Liibiya. - Awdinle Online
UNHCR oo soo bandhigtay Tirada Muhaajiriinta lagu badbaadiyay Xeebaha Liibiya.
February 22, 2020 (Awdinle Online) –Hay’adda Qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobe ee loosoo gaabiyo UNHCR ayaa shaacisay in ay soo badbaadiyeen in ka badan 1,700 Muhaajiriin sharci-darro uga baxayay Dalka Liibiya, si ay u gaaraan Dalalka Yurub.
War kasoo baxay Hay’adda Xalay waxaa lagu sheegay in ay kordhiyeen howlgalada lagu raadinayo dadka u badan dhalinyarada oo tahriib ahaan uga tagaya Liibiya si ay u gaaraan Talyaaniga.
Hay’adda UNHCR, waxa ay intaa ku dartay in sanadkaan 2020 ee bilawga ah ay sameeyeen howlo looga hortagayo tahriibayaasha oo dhibane ku noqda Biyaha u dhaxeeya Liibiya iyo Talyaaniga.
“1737 muhaajiriin sharci-darro ah ayaa laga soo badbaadiyey xeebaha Liibiya, howshaan waxa ay socotay tan iyo bilowgii sannadkan, shaqaalaha Hay’adda ayaa Gaaf-wareegaya xeebaha Liibiya si ay u helaan Dadka tahriibayaasha oo si indho la’aan ah uga baxa Xeebaha Liibiya” sidaasi waxaa lagu yiri warka kasoo baxay Hay’adda UNHCR.
Wakaaladda Wararka ee Xinhua oo heshay nuqul kamid ah Xogta dadkaan waxa ay warbixin ay daabacday ku sheegtay in Muhaajiriintaan laga soo bad-baadiyay Xeebo dhaca Waqooyi Bar iyo Galbeedka Magaalada Tripoli oo ah Caasimadda Liibiya.
Dadka la badbaadiyay waxa ay kasoo kala jeedaan Dalalka Soomaaliya, Eretareeya, Itoobiya iyo Suudaan sida ay sheegtay Wakaaladda Xinhua, balse kama sheegin sida ay uga kala soo jeedaan dalalkaan.
Liibiya oo ay ka aloosan tahay xasarad dagaal, waxaa wali kasii socda Tahriibka dhalinyarada kasoo jeeda dalal ay kamid tahay Soomaaliya, waxaana ay maraan dhibaatooyin kala duwan kahor inta aysan doonta raacin sida in lacago madax furasho ah oo laga qaato iyo tacadiyo loogu geysto Xabsiyada ay ku xiran yihiin.
Dhamaadkii bishii December ee la soo dhaafay, Hay’adda Caalamiga ee Socdaalka (IOM) waxa ay sheegtay in ay dib dalalkooda ugu celisay Tahriibayaal gaaraya ilaa 10 kun oo muhaajiriin ah oo dalbaday in dalkooda dib loogu celiyo.
Previous articleSomaliland oo ka hadlay booqashada Wasiirka Maaliyadda Itoobiya
Next articleMaalintii saddexaad oo xiran Suuqa weyn ee magalada Gaalkacyo
Musharixiinta iyo Beesha Caalamka oo shir xasaasi ah yeeshay